St. Eustatius - Saba - Sint Maarten ferry vaovao nosy vaovao no natomboka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » St.Eustatius Breaking News » St. Eustatius - Saba - Sint Maarten ferry vaovao nosy vaovao no natomboka
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao • People • Sint Maarten Breaking News • St.Eustatius Breaking News • Vaovao Mahafaly St. Maarten • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny M / V Makana an'ny Blues and Blues Ltd. avy any Anguilla.
Makana Ferry dia manomboka ny dia iraisam-pirenena eo anelanelan'ny Statia, Saba ary Sint Maarten amin'ny 1 Novambra 2021.
Ny Blues sy Blues Ltd an'ny Anguilla dia nahazo ny volavolan-dalàna ho an'ny fifandraisana an-dranomasina eo amin'ny nosy miaraka amin'ny M / V Makana.
Makana dia fantsom-bokotra Saber catamaran 72 mirefy 150 metatra, mahazaka mpandeha XNUMX mitafo amin'ny birao roa.
Ny fanomanana ataon'ny ekipa iraisam-pirenena dia mandroso tanteraka hahafahany mahafeno ny daty fandefasana.
Ny Blues sy Blues Ltd. any Anguilla dia kasaina hanombohana ireo dia an-nosy eo anelanelan'ny Statia, Saba ary Sint Maarten amin'ny 1 Novambra 2021. Eo am-pandrosoana tanteraka ny fanomanana ataon'ny ekipa iray eo anelanelan'ny nosy mba hahafahany hihaona amin'ity daty ity. Hanaraka tsy ho ela ny fampahalalana momba ny saran-dalana sy ny fampahalalana marina momba ny fandaharam-potoana.
Ny Blues sy Blues Ltd an'ny Anguilla dia nahazo ny volavolan-dalàna ho an'ny fifandraisana an-dranomasina eo amin'ny nosy miaraka amin'ny M / V Makana. Makana dia fantsom-bokotra Saber catamaran 72 mirefy 150 metatra, mahazaka mpandeha XNUMX mitafo amin'ny birao roa. Misy tokotanin-tsambo ambany, efi-trano ambony (misokatra) ary faritra misy sokajin'orinasa ambony. Ny tokotanin-tsambo ambany sy ny faritra ambony dia samy misy rivotra feno ary feno fidiovana roa sy bar iray.
Ny Makana dia hanome ny enta-mavesatra sy ny entana. Ny catamaran dia hitsangantsangana am-pilaminana amin'ny hafainganam-pandeha 23 knot miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 31 knots. Ny dia dia tokony ho 45 minitra avy any Saba mankany Statia, 75 minitra avy any Saba ka hatramin'ny St. Maarten ary 85 minitra avy eo Statia ny St. Maarten. Noho ny fameperana COVID-19 any St. Kitts, ny làlana mankany amin'ity nosy ity dia mbola tsy afaka alamina raha tsy misy fampandrenesana fanampiny.
Makana no teny Hawaii an'ny "Fanomezana". Ny Blues & Blues Ltd. dia nandray ny sambo tato ho ato. Ny mpandeha dia afaka manantena serivisy mahafinaritra sy azo antoka feno amin'ny WiFi an-tsambo sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera. Ny Makana dia hapetraka ao Statia na Saba. Entanina ny mponina hangataka toerana banga amin'ny maha-ekipazy azy.
Samuel Connor, tompon'ny Blues sy Blues Ltd., dia nilaza hoe: “Orinasa iray izahay mianakavy. Mino tanteraka izahay fa afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy toekarena amin'ireo nosy amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-dranomasina interisland anisan'izany i St. Barth, Anguilla ary Nevis ".